Semalt dia manolo-kevitra ny fomba hanakanana ny sazy ara-panadinana Sharebutton
Nanimba ny statistika Google Analytics ve ny sari-panovàna sandoka Sharebutton? Tsy mila manahy ianao. Mitoera. Sharebutton.to fitsangatsanganana spam dia mahatonga azy ho toy ny maro amin'ireo mpitsidika marina no mipetraka ao amin'ny tranonkalanao.
Misy fiantraikany amin'ny tranokala hatramin'ny taona 2015 ny tranonkalan'ny fanitsiana sandoka. Na izany aza, i Sharebutton Google Analytics dia heverina ho iray amin'ireo sehatra taloha izay mbola mandoto ny tahiry GA ao amin'ny sehatry ny varotra ao amin'ny votoatin-javatra .
Araka ny hevitr'ireo tetik'asa, ny sariohatra momba an'i Sharebutton dia manasongadina ny fiantraikany amin'ny kaonty GA mivantana. Mba hisintonana ireo mpiserasera amin'ny aterineto, ny mpampiasa sy ny mpanafika dia mampiasa fomba fiteny toy ny fehezanteny manan-danja, mpitsidika, fanasarotana, tranonkala sandoka, ary fitsaboana ny fifamoivoizana sy rohy amin'ny tranokala.
Raha vao fantatrao fa ny ankamaroan'ny fifamoivoizana dia avy amin'ny sari-panavaozana an'i Sharebutton, Diniho ny fomba amoahana ny spam an'i Google Analytics raha toa ianao ka manaiky ny spam. Araka ny voalazan'ireo manam-pahaizana SEO, Sharebutton dia nibitsika tao amin'ny tranonkala mampiasa teny miova ho an'ny URL toy ny bokotra sy zaraina.
Mba hahafantarana na tsia ny spam an'i Sharebutton amin'ny Google Analytics dia mizara ampahany amin'ny fitohanan'ny fifamoivoizana ianao. Andrew Dyhan, manam-pahaizana ambony indrindra avy amin'ny Semalt , dia manoro hevitra mba handikana ny adiresy URL an'ity spam referral ity ary hametraka azy ao amin'ny adiresy boaty mba hahafantarana ny toerana misy ny tranokala.
Ny asan'i Sharebutton miasa
Tsy misy fiantraikany amin'ny fizotry ny tranonkala amin'ny fomba rehetra ny Sharebutton. Ity spam Google Analytics ity dia miasa amin'ny fitaterana ny fifamoivoizana ho an'ny mpiara-miasa sy ny tranonkala mifanaraka aminy. Na izany aza, tsy azo atao ny manara-maso ny lalana na manokatra sora-baventy Sharebutton.to satria ity spam fanadihadiana hosoka ity dia ahitana kôdeksa maloto izay afaka manaparitaka ny malware sy ny loza mety hitranga ao amin'ny tranokalanao.
Ny famoahana ny sora-baventy Sharebutton.to dia hiafara amin'ny fidirana amin'ny hackers izay afaka miditra mora amin'ny kaonty Facebook-ny tambajotra sosialy, tenimiafina, ary ny fahazoan-dalana hafa ara-bola.
Na dia izany aza, tsy misy toerana ahiahy raha toa ka nandefasanao ny votoaty avy ao amin'ny Sharebutton.to vao haingana. Fidio fotsiny ny malware manohitra tanteraka ary manandrama manontolo amin'ny fijerena raha misy voka-dratsy ny tranonkala .
Ahoana ny fanakanana shamebutton.to spam referral avy amin'ny tatitra GA
Procedure 1. Manova ny fomba fanoratry ny sivana
Atomboy ny kaontinao GA ary tsindrio ny fizarana 'Admin'.
Fidio amin'ny sivana 'Filaminana Rehetra' ary mamorona filtre vaovao.
Sokafy ny boaty 'Fanondroana ny anaranao' ary atsaharo ny 'Sharebutton.to.'
Mametraka 'Custom Filter' ho toy ny karazan-tsindrim-peonao ary safidio 'Loharano fanentanana' ao amin'ny menu 'Filter Field'
Tsindrio ny sari-tanin'ny 'sivana', midira ao amin'ny Spam Google Analytics Sharebutton, ary tsindrio ny bokotra 'Save'.
Procedure 2. Manova ny fanovana HTTP
Sokafy ny kaonty cPanel ary midira.
Tsindrio ny 'Manager de File' ary tsindrio ny 'Root Document' ho an'ny tranokalanao.
Tsindrio ny bokotra 'Show Hidden Files' ary tsindrio ny 'Ale.'
aorian'ny fikarakaranao ny rakitra htaccess, tsindrio havanana ary tapaho ny 'Code Edit' ary tsindrio ny 'Save.'
Procedure 3. Hanova ny sivana GA amin'ny fiteny GA
Midira ao amin'ny kaontinao Google Analytics ary tsindrio ny 'Admin Tab.'
Sokafy ny sehatra 'Hijery' ary ampio filtre vaovao.
Nipoaka ny 'Language Spam' tao amin'ny boaty
Tsindrio ny 'Verify Filter' icon ary tsindrio ny bokotra 'Save'.
Ireo fombafomba voalaza etsy ambony ireo dia miasa amin'ny sehatra rehetra mifandraika amin'izany, toy ny Spam Sharebutton Google Analytics. Tadiavo ny antontan'isa mazava sy marina amin'ny alàlan'ny fanararaotana ny sari-panavaozana Sharebutton amin'ny alàlan'ny fanovana ny lamin'ny sivana, ny HTTP, ary ny fanovana ny sivana amin'ny fiteny. Aza miandry mandra-pahatongan'ny solosaina manomboka mihamitombo Source .